Samsung Gear S2 Review | Androidsis
Alfonso de Frutos | | hevitra, Samsung, SmartWatch
Samsung gaga izahay nandritra ny fanontana farany an'ny IFA tany Berlin fampidirana ny Samsung Gear S2, famantaranandro voalohany an'ny orinasa miaraka amina dial dial. Ho fanampin'izany, ny mpamokatra dia niharan-doza tamin'ny fampiasana ny rafitra fikirakirany manokana, Tizen, miala amin'ny Android Wear manerantany.
Ny fahatsapako voalohany rehefa nanana fotoana nisedra an'ity smartwatch ity dia tena tsara. Izao dia mitondra anao feno aho Samsung Gear S2 famerenana, famantaranandro maranitra dingana ambonin'ireo mpifaninana aminy.
1 Samsung Gear S2, endrika madio sy vaovao ary mamaky tany
2 Toetra teknika Samsung Gear S2
2.1 Samsung Gear S2, famaritana ara-teknika
3 Tizen, fahombiazana tanteraka
7.2 Galerie sary Samsung Gear S2
Samsung Gear S2, endrika madio sy vaovao ary mamaky tany
Alohan'ny hiresahana ny famolavolana ny Samsung Gear S2 dia tsy maintsy hazavaintsika izany ny kinova izay nohadihadiana dia ny maodely fototra na fanatanjahantena. Misy dikan-teny hafa koa, ny Gear S2 Classic, izay mikendry ny hanafika tsenan'olon-dehibe kokoa, noho ny fitendrena azy, izay na dia manana habe mitovy aminy aza dia toa somary lehibe kokoa noho ny Samsung Gear S2 Sport, ary ny fehikibo vita amin'ny hoditra manome endrika miavaka. mahonon-tena sy matotra.
farany misy maodely 3G an'ny Gear S2 Sport Azontsika atao ny mamaly antso amin'ny alàlan'ny headset bluetooth, saingy satria tsy hahatratra ny tsena Espaniôla izy io satria mampiasa e-SIM ny fifandraisana S S2 3G ary mandra-pahafahan'ireo mpandraharaha sy ny rafitra ara-dalàna azy io, misalasala aho fa handeha io jereo eto amin'ny firenentsika.
Raha miverina amin'ny Samsung Gear S2 Sport dia tsy vao sambany niditra tao amin'ny tsenan'ny smartwatch i Samsung. Ary toa efa nianatra ny lesona azony izy manitsy ireo bibikely izay nilanja maodely teo aloha. Ny Samsung Gear S2 vaovao dia famantaranandro maivana izay mifanaraka kokoa amin'ny filozofia vokatra tadiavin'ny ankamaroan'ny besinimaro.
Tsy hahita fakan-tsary miorina ao anaty famantaranandro ianao, na ny fahaizana mamaly antso amin'ny alàlan'ny tadinao ho mikrô. Tapitra ireo grotesques ireo. Samsung dia nitady endrika iray hisorohana ny habeny sy ny estetika teknolojia, mamorona vokatra toa famantaranandro fotsiny. Tsy misy zavatra hafa.
Ny smartwatch Samsung vaovao dia mivoaka tsara amin'ny resaka habe, hateviny ary lanjany. Tena mahatsapa tena tsara eo amin'ny tanana, maivana sy ahazoana aina hitafy. Matetika aho tsy manao famantaranandro ary afaka roa andro dia tsy dia nahazatra ny nanao azy ireo intsony aho. Asa lehibe amin'ity lafiny ity.
Ny haben'ny dial dia mety ho an'ny lahy sy ny vavy. Ny lanjan'ny vy tsy matevina dia tsy mandanja ny famataranandro. Ary inona no holazaina momba ny anao bezel mihodina hita eo amboniny. Hiresaka momba ny fampiasana azy aho avy eo, fa ny fihetseham-po amin'ny fikasihana dia tena mahafinaritra, misosa tsara miaraka amin'ny tsindry kely.
Samsung dia nanisy bokotra roa amin'ny lafiny ankavanana izay mamela anao hanao asa samihafa. Miorina ny fananganana ary tonga lafatra ny tsindry. Samsung dia tena nanao pass smartwatch ho famantaranandro mahazatra. Asongadino ihany izany amin'ny farany ny charger Gear S2 dia tsy misy tariby. Miasa tanteraka izy io, mampatsiahy ny Motorola Moto 360. Izaho manokana dia aleoko mampiasa base tsy misy tariby noho ny famantaranandro manana output USB micro ary izany dia miteraka fitomboan'ny habeny. Tsy misy manohitra izany.
Ny tena tsy tiako loatra dia ny rafitra fehy, izay tsy mahazatra. Samsung dia nanapa-kevitra ny hiloka amin'ny mekanisma manokana ka ny hany vahaolana raha te hanova ny tadiny ianao dia ny mitady katalaogy mifanaraka amin'ny Samsung Gear S2, ary amin'izao fotoana izao dia tsy dia be loatra.
Ilay iray avy amin'ny tarika fitsapana anay, izay misy ny vokatra fototra, Vita amin'ny silikona izy io ary misy kasika plastika. Ary ao anatin'io boaty io ihany dia misy andiana fehikibo fanoloana, raha sendra misy tsy fahombiazana ianao.
Toetra teknika Samsung Gear S2
Samsung Gear S2, famaritana ara-teknika
Refy ara-batana 42.3 x 49.8 x 11.4 mm 47 grama amin'ny kinova fototra; 39.9 x 43.6 x 11.4 mm 42 grama amin'ny klasika; 44.0 x 51.8 x 13.4 mm 51 grama amin'ny 3G
Sarimihetsika boribory Super AMOLED 1.2 mirefy. Fiarovana Gorilla Glass 3
Fanapahan-kevitra 360 x 360 teboka; 302ppi
Exynos 3250 1GHz processeur
Memory 4 GB tsy azo velarina
Rindranasa rindrambaiko Tizen azo ampiasaina
Fanoherana ny rano IP68
802.11n Fifandraisana Wifi, Bluetooth 4.1, NFC
Sensors Accelerometer, gyroscope, tahan'ny fo, hazavana manodidina, barometra; Manampy GPS ny kinova 3G
250mAh batterie fototra sy kinova Klasika
Price: 349 euro (amin'ny Amazon), el Ny maodely klasika dia hatramin'ny 379 euro (Amazon)
Ny Samsung Gear S2 dia tsy dia mifanalavitra loatra amin'ny lafiny teknika amin'ireo mpifaninana aminy. Tena mandeha tsara ny famantaranandro, na dia misy fahasamihafana lehibe aza. Ary izany dia satria fantatrao tsara fa ny Gear S2 dia miasa miaraka amin'i Tizen.
Samsung dia tsy te-hametraka rindrina amin'ny tontolo iainana, mamela ireo fitaovana Android amin'ireo mpanamboatra hafa hiasa miaraka amin'ny famantaranandrony, na dia misy fetrany aza. Ary misy fepetra farafahakeliny hampiasana ny Samsung Gear S2 amin'ny fitaovana Android rehetra. Ho an'ity, ny finday dia tsy maintsy manana farafahakeliny 1.5 GB RAM ary manana Android 4.4 na avo kokoa. Raha manana fisalasalana amin'ny fampifanarahana ny Gear S2 amin'ny fitaovanao ianao, azonao atao ny mijery ny tranokalan'ny mpanamboatra izay mampiseho finday tohanan'ny.
Tizen, fahombiazana tanteraka
Samsung dia nahavita namely ny marika tamin'ny interface mifototra amin'ny bezel mihodina, zava-mahatalanjona amin'ny lafiny fampiasana. Ny fanatanterahana sy ny fampiasana ny fahafaha-manao azy dia mahatalanjona manolotra traikefa tena feno an'ny mpampiasa.
Rehefa avy nanandrana fantsom-pandrefesana samihafa aho dia mazava be fa ny fitaovana izay mahalala tsara ny fomba hanararaotana ny fifehezana ara-batana dia ilay smartwatch Samsung vaovao. ny Ny fahafahanao mivezivezy haingana amin'ireo rindrambaiko fampiharana samihafa nefa tsy mila mikasika ny efijery dia tena mahafaly.
Ny bokotra ambony eo amin'ny ilany ankavanan'ny famantaranandro dia ampiasaina hisintonana "miverina" indray mandeha, raha ny bokotra ambany kosa dia hitondra antsika amin'ny varavarankely lehibe, ny varavarankely amin'ny fotoana. Raha efa eo amin'ity varavarankely ity isika ary manindry ny bokotra eo ambany, amin'ity tranga ity dia hitondra antsika any amin'ny efijery lisitry ny lisitry ny fampiharana izany.
Amin'ny voalohany dia sarotra ny mizatra, na dia azonao aza izany, dia rafitra tena intuitive izy ary tena ahazoana aina ampiasaina. Asongadino fa ny Efijery Super AMOLED 1.2 mirefy, Mahatratra ny vahaolana 360 x 360 teboka ary 302 dpi manolotra fampisehoana mahatalanjona.
Toy ny mahazatra, ny mainty dia toa lavorary, zavatra fantatr'i Samsung satria nanararaotra nametraka ny interface tamin'ity loko ity foana izy. Mamela haavo 10 ambaratongaNa dia any ivelany aza isika dia ho hitantsika avy hatrany ny toe-javatra ary hampihetsika ny maody ivelany. Nanandrana toerana hafa aho ary tamin'ny fametrahana ny famirapiratana ho 7 ny efijery famantaranandro dia mijery tanteraka amin'ny toe-javatra rehetra.
Ho fanampin'izany, ny Samsung Gear S2 dia mamela anao hampihetsika ny Mode "display-on-display" foana. Amin'izany fomba izany, na dia tsy mampiseho ny antsipiriany rehetra momba ny endrika nofidintsika aza izy io, dia hasehony antsika foana ny fotoana fa tsy mila manao fihetsika akory.
Na izany na tsy izany, ary tsy toy ny famantaranandro hafa, Ny smartwatch Samsung dia tsy nanome ahy olana rehefa mampihetsika azy. Saika isaky ny fihodinanan'ny famantaranandro no nihetsika ny famantaranandro teo no ho eo.
Tsy te hampitsahatra ity famerenana ny Samsung Gear S2 ity aho raha tsy midera izany sensor amin'ny tahan'ny fo. Sambany aho tsy nila nanolotra azy io imbetsaka, nitandrina ny tenako tsy miovaova tanteraka, hamaky azy io mamaky ny fitempon'ny foko. Amin'ity tranga ity dia nahita ahy tamin'ny toe-javatra samihafa ny gadona, na dia mihazakazaka aza (raha mbola tsy nahetsika loatra ny sandriko).
Samsung dia nanao asa tsara: dia nahatratra ny marika feno tamin'ny famolavolana sy ny famaranana an'ny Samsung Gear S2, ny interface Tizen dia tonga lafatra raha vao zatra izany ary ny bezel mihodina dia manome azy kalitao fanampiny izay mahatonga ahy hieritreritra fa ny ho avin'ny famantaranandro marani-tsaina dia toa tsara sy tsara kokoa.
Raha izany dia ampianay a fahaleovan-tena mandritra ny roa andro, izay mbola lavitra lavitra ny 4-5 andro izay heveriko fa ilaina amin'ny fitaovana iray karazana, heveriko fa eo amin'ny lala-mahitsy i Samsung.
Mahafinaritra ny endrika sy ny vita
Ny bezel mihodina dia manolotra traikefa miavaka sy tsy manam-paharoa amin'ny mpampiasa.
Raha vantany vao zatra izany, Tizen dia rafitra intuitive ary tena ahazoana aina ampiasaina.
Miaraka amin'ny fizakan-tena mandritra ny roa andro dia mbola mieritreritra aho fa somary zara raha ny famantaranandro
Galerie sary Samsung Gear S2
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung Gear S2, famakafakana: Samsung dia mamely ny marika amin'ny smartwatch boribory vaovao